Vol। 16 डिसेम्बर, 1912। नम्बर 3
आईटी हिउँदको अक्रान्तको हो। दक्षिणी पूर्वेको लाइट-बीमले रातको सेनालाई टाढै राख्छ र त्यस दिनको उदाउँदो प्रभुको बारेमा बताउँछ। दिन एक दिनको साथसाथ बादलहरू बटुल्छन् र बर्षको सब भन्दा लामो छायाहरू कास्ट गर्दछन्। रूखहरू ना bare्गो छन्, झारपात कम छ, र शीत-डार्ट्सले बाँझो जमिनमा छेड्छ।
साँझ आउँछ; बादलले आकाशलाई सिसाको गुम्बदमा परिवर्तन गर्दछ। हावाले मृत्युको शिला कम गर्दछ; दक्षिणी पश्चिमको पृथ्वी रेखाको माथि थोरै स्थानमा खैरो आकाश एक चरणबाट माथि उठेको छ। स्वर्गको मर्ने राजा, बैजनी रंगको कफनमा लुटिएको आगोको भुँइ डरलाग्दो ठाउँमा पुग्छ, बेंसीको टाढा टाढा दुर्गम पहाडहरू भएर। रंगहरू फेड; सीसा बादलहरू उनको नजिक छ; हावाहरू मर्दछन्; पृथ्वी चिसो छ; र सबै उदास मा लपेटिएको छ।
यसको अन्तिम वर्षको समय त्रासदी भयो। सोचबिचार गर्ने मान्छे मा हेर्छ, र यसमा प्रतीकात्मक जीवनको त्रासदी sees र आफ्नै भविष्यवाणी देख्दछ। ऊ जीवन र मृत्युको अन्त्य दौरमा प्रयासको बेकारको देख्दछ र ऊ उदास हुन्छ। बेहोश उसले वर्षौंको भारलाई ढाकछोप गर्छ र सपनाविना निद्राको बिर्सन बिर्सिदैन। तर ऊ सक्दैन। मानवजातिको भय wo्कर विलापले शोकको उदासलाई छोडिदिन्छ; ऊ सुन्छ। बढ्दो मानिसको कमजोरीहरू: हराएको विश्वास, टुक्रिएको मित्रता, कृतघ्नता, कपटी, कपट, देखिएका छन्। उसको हृदयमा यिनीहरूको लागि कुनै ठाउँ छैन। ऊ संसारको पीडा थोरैमा महसुस गर्दछ र मानिसको हृदयमा दुःखी भएको छ। मानिस आफैंले उसले भनेको सुन्न, सुन्न, बोल्न शक्तिको लागि पुकार्छ। विगतका जीवनहरू र जीवन भित्र आउनको लागि जीवनहरू, र यी चुपचाप बोल्छन्।
सूर्यको बाटोले मानिसको जीवनको प्रतीक दिन्छ: उठ्ने निश्चित रूपमा - र आकाश उज्ज्वल हो कि, वा बादलमा छ - निश्चित छ कि अँध्यारोमा डुब्ने। यो अनगिनत युगहरु को लागी कोर्स गरीएको छ र युगहरु अज्ञात को लागी जान सक्छ। मानिसको सम्पूर्ण जीवन भनेको हवाको एक पफ हो, समयमा फ्ल्यास। यो प्रकाशको प्रवाह हो, भरिएको, पोशाकमा, त्यो खस्छ र केही क्षणहरूको लागि स्टेजमा खेल्छ; त्यसपछि डरले काम्छ, हराउँछ, र फेरि देख्न सकिदैन। ऊ आउँछ तर ऊ कहाँबाट आउँदैन जान्दैन। ऊ कहाँ जान्छ? के मानिस रुने, हाँस्न, दु: ख भोग्न र रमाउनको लागि जन्मिन्छ, माया गर्न मात्र कि ऊ मर्न सक्छ? के मानिसको भाग्य सँधै मृत्यु हुन्छ? प्रकृतिको कानून सबैको लागि एकै हो। त्यहाँ बढ्ने घाँस ब्लेडमा विधि छ। तर घाँस ब्लेड घाँस ब्लेड हो। मानिस मानिस हो। घाँस ब्लेड फस्छ र सुक्छ; यसले सूर्यको किरण र शीतलाई प्रश्न गर्दैन। मानिस प्रश्न गर्छ जब उसले कष्ट भोग्छ, माया गर्छ, र मर्छ। यदि उसको जवाफ छैन भने उसले किन प्रश्न गर्ने? पुरुषहरूले युगहरूमा सोधपुछ गरेका छन्। अझै, घाँस ब्लेडको रसलमा प्रतिध्वनि बाहेक त्यहाँ अरू कुनै उत्तर छैन। प्रकृतिले मान्छेलाई जन्म दिन्छ, त्यसपछि उसलाई अपराधी गर्न बाध्य पार्छ जुन उसले कठिनाई र मृत्युको साथ दोहोर्याइन्छ। दयालु प्रकृति कहिल्यै प्रलोभनमा र नष्ट गर्न को लागी हुनुपर्दछ? शिक्षकहरूले राम्रो र नराम्रो, सही र गलतको कुरा गर्छन्। तर के राम्रो छ? के नराम्रो? के ठीक छ? के गलत? - कसलाई थाहा छ? कानूनको यस ब्रह्माण्डमा ज्ञान हुनुपर्दछ। के प्रश्न गर्ने व्यक्ति कहिल्यै अनुत्तरित रहन्छ? यदि सबैको अन्त मृत्यु हो भने, किन यो आनन्द र जीवनको कष्ट? यदि मृत्यु सबैको अन्त्य हुँदैन भने ऊ कहिले, उसको अमरत्व कसरी जान्ने?
त्यहाँ मौनता छ। जब गोधूलि बढ्दै जान्छ, हिउँ फ्लेक्स उत्तरबाट आउँदछ। तिनीहरूले जमेका खेतहरू छोप्छन् र पश्चिममा सूर्यको चिहान लुकाउँछन्। तिनीहरूले पृथ्वीको बाँझोपन लुकाउँछन् र यसको भविष्यको जीवनको सुरक्षा गर्दछन्। र मौनबाट बाहिर मानिसका प्रश्नहरूको जवाफ आउँछ।
O, wretched Earth! हे थकित पृथ्वी! खेलहरूको प्लेहाउस, र अनगिन्ती अपराधहरूको रगत-दाग थियेटर! हे गरीब, दुःखी मानिस, खेलका प्लेयर, पार्ट्सका निर्माता तपाईंले अभिनय गर्नुभयो! अर्को वर्ष बित्यो, अर्को आउँछ। को मर्छ? को बस्ने? को हाँस्छ? को चिच्याउँछ? कसले जित्यो? कसले हरायो, ऐनमा भर्खरै अन्त्य भयो? के भागहरू थिए? क्रूर निरंकुश, र गरीब उत्पीडित, संत, पापी, गुँड, र ageषि, तपाइँ खेल्ने भागहरू हुन्। पोशाकहरू तपाईले लगाउनुहुन्छ, जीवनको निरन्तर कार्यक्रमको प्रत्येक सफल कार्यमा बदल्दै दृश्यहरूसँग बदल्नुहोस्, तर तपाइँ अभिनेता रहनुहुन्छ — केही कलाकारहरूले राम्रो खेल्छन्, र थोरैले उनीहरूको भागहरू जान्दछन्। कहिले तपाई, गरीब अभिनेता, तपाई र अरूबाट लुकेको, तपाईको भागको पोशाकमा, मञ्चमा आउनुहोस् र खेल्नुहोस्, जब सम्म तपाइँ खेल्ने भागहरूमा प्रत्येक कामको लागि भुक्तान र भुक्तान नगरुन्जेल तपाईले आफ्नो समय र सेवा प्रदान नगरेसम्म खेलबाट स्वतन्त्रता कमायो। गरिब मान्छे! धेरै उत्सुक वा इच्छुक अभिनेता! दुखी किनभने तपाईलाई थाहा छैन, किनकी तपाईले आफ्नो भाग सिक्नुहुने छैन - र त्यो भित्र छुट्टै रहनुहुनेछ।
मानिसले सत्यलाई खोजी गर्ने संसारलाई भन्छ, तर ऊ पक्रिराख्छ र झूटबाट फर्कदैन। मानिस चहकिलो प्रकाशको लागि बोलाउँदछ, तर जब अन्धकारबाट उसलाई रोक्नको लागि प्रकाश आउँछ तब स्लिंगहरू घट्दछन्। मानिसले आफ्नो आँखा बन्द गर्छ, र कराउँछु कि उसले देख्न सक्दैन।
जब व्यक्तिले हेर्छ र चीजहरूलाई प्रकाशमा ल्याउँदछ, प्रकाशले राम्रो र नराम्रो देखाउँदछ। उसको लागि के हो, उसले के गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो छ, सहि छ, उत्तम छ। अरू सबै, उसको लागि खराब छ, गलत हो, उत्तम होईन। यो हुन दिनु पर्छ।
जसले हेर्न देख्ने विल्स, र उहाँले बुझ्न हुनेछ। उसको ज्योतिले उसलाई देखाउँदछ: "होईन," "हुन दिनुहोस्," "त्यो उत्तम होइन।" जब मान्छे "हो" सुन्छ र "हो" थाहा पाउँदछ, तब उसको बत्तीले उसलाई देखाउँदछ: "हो," "गर्नुहोस्। यो, "" यो उत्तम हो। "प्रकाश आफैंले देख्न सक्दैन, तर त्यसले ती वस्तुहरू उनीहरू जस्तो देखाउँदछ। बाटो स्पष्ट छ, जब मानिसले यसलाई हेर्न इच्छा गर्दछ - र अनुसरण गर्नुहोस्।
मानिस अन्धा, बहिरा, लाटो हो; तर उसले देख्न, सुन्न र बोल्न सक्छ। मानिस अन्धा हो र, प्रकाशको डरले, अन्धकारमा हेर्छ। ऊ बहिरो छ किनकि उसको इन्द्रिय सुनिरहेको छ, उसले आफ्नो कानलाई विवादास्पद बनाउन प्रशिक्षण दिन्छ। ऊ लाटा छ किनकि ऊ अन्धा र बहिरा छ। उनि प्रेतहरू र डिमार्मोनीको कुरा गर्दछ र निष्कपट रहन्छ।
सबै चीजहरूले तिनीहरू एक हुन् जसले देख्दछन्। नदेखीएको मान्छे वास्तविकबाट सिम्ब्लान्स भन्न सक्दैन। सबै कुराले आफ्ना स्वभाव र नामहरू सुन्छन्, जसले सुन्नुहुन्छ; सुन्न नसक्ने मान्छेले आवाज छुट्याउन सक्दैन।
मानिसहरूले हेर्न सिक्नेछन्, यदि उनले उज्यालोमा हेरे भने; उसले सुन्न सिक्छ, यदि उसले सत्यको कुरा सुन्यो भने; जब ऊ देख्छ र सुन्छ उसले बोल्नु सक्ने शक्ति हुन्छ। जब व्यक्तिले देख्दछ र सुन्छ र शक्तिको निरुपयोगीसँग बोल्छ, उसको प्रकाश असफल हुँदैन र उसलाई अमरत्व जान्न दिनेछ।